Otu esi etinye Skype na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Usoro 2. Wụnye Skype na Snapcraft (Snap)
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Skype na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Iji wụnye Skype na sistemụ Ubuntu gị, ị ga-achọ ijide n'aka na etinyere ngwugwu ndị a. Gbaa iwu a ka ị nyochaa ma ọ bụ wụnye ngwugwu:
Nzọụkwụ mbụ ịwụnye Skype na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị bụ ibubata ebe nchekwa na Skype.
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye Skype na Snap. Site na ndabara, ekwesịrị ịwụnye njikwa ngwugwu Snapcraft na desktọpụ Ubuntu gị ọ gwụla ma i wepụrụ ya na mbụ.
arụnyere snap? Mafere ahịrị ole na ole ndị a wee gaa n'ihu ozugbo na ntinye nke Skype na Snap
Ileghara ihe dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi Skype dị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwugwu ọhụrụ.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> Skype. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Skype na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. N'ozuzu, Skype na-enye gị ohere ịme ma vidiyo na oku olu na kọntaktị nkeonwe na azụmahịa gị. Skype nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru n'etiti ọtụtụ maka mkparịta ụka n'etiti otu ma bụrụkwa onye ndu ahịa.
Categories Ubuntu Tags Skype, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo